पाथिभरा माताले मनोकामना पुरा गरुन, हेर्नुहोस् मंसिर १ गते सोमबारकाे राशिफल यस्तो छ! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > पाथिभरा माताले मनोकामना पुरा गरुन, हेर्नुहोस् मंसिर १ गते सोमबारकाे राशिफल यस्तो छ!
admin November 16, 2020 November 16, 2020 राशिफल	0
अध्ययन अध्यापनका सन्दर्भमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ । प्रतिपक्क्षी तथा प्रतीस्पर्दीहरुको बृद्धि हुन सक्नेछ । नयाँकाम प्रारम्भ गर्नका लागी समयले साथ दिएको छ तथापि साजेदारी काममा भने सजग रहनु राम्रो रहनेछ । मान्यजनको सहयोग द्वारा भाग्योदयको योग रहनेछ ।